Manohy manetsika ny fizahan-tany ny fizahan-tany ny fizahan-tany any Karaiba
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Mexico » Manohy manetsika ny fizahan-tany ny fizahan-tany ny fizahan-tany any Karaiba
Ity herinandro ity dia manamarika toko matanjaka amin'ny famerenana ny sidina mankany Karaiba Meksikana
Southwest Airlines hanohy ny lalana Cozumel mankany Houston miaraka amin'ny sidina fito isan-kerinandro
Ny fifandraisan'ny rivotra eropeana amin'i Caribbean Caribbean dia mitombo hatrany
Frontier Airlines dia mandefa ny làlany Cincinnati - Cancún isan-kerinandro amin'ity sabotsy ity
Mitohy ny famerenana ny fizahan-tany ao amin'ny Caribbean Caribbean satria ny Southwest Airlines dia mamerina ny làlany any Houston - Cozumel amin'ny sidina fito isan-kerinandro, raha Volaris mampitombo ny sidina mankany amin'ny nosy avy any Mexico City. Mandritra izany fotoana izany dia mandray sidina vaovao i Cancún avy any Eropa, Amerika atsimo ary Etazonia
“Ity herinandro ity dia manamarika toko matanjaka amin'ny famerenana ny sidina mankany Karaiba Meksikana. Amin'ny alahady, Frontier Airlines nanangana ny lalàny Miami - Cancún, izay hisidina inefatra isan-kerinandro ary mahatonga an'i Miami ho tanàna amerikana mifandray indrindra amin'i Cancún, ary koa ivon'ny lehibe any Amerika Latina ”hoy i Dario Flota Ocampo, talen'ny Quintana Roo Tourism Birao.
Ny alatsinainy 8 martsa koa dia nanamarika ny fiverenan'ny làlan'i Iberojet any Madrid - Cancún isan-kerinandro, izay hiakatra tsimoramora in-dimy isan-kerinandro amin'ity fahavaratra ity, ny vanim-potoana avo ho an'ny fizahantany eropeana. Ny fanombohana nataon'i Iberojet, izay vao natambatra ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka EVEL! ary Orbest, dia niteraka ny fahalianan'ny kaompaniam-pitaterana Espaniola WAMOS, izay hanomboka ny sidina Madrid - Cancún amin'ny faran'ny volana martsa.
"Ny alakamisy dia manamarika ny fiverenan'ireo sidina roa Andrefana manan-danja: làlana isan'andro Phoenix - Cancún ary ny làlana isan'andro Houston - Cozumel," hoy i Flota Ocampo.
Tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Cozumel ihany koa ny làlana Volaris iray avy any Mexico City, izay hanampy fe-potoana roa isan'andro amin'ny 26 martsa hatramin'ny 12 aprily.
Frontier Airlines dia mandefa ny làlany Cincinnati - Cancún isan-kerinandro amin'ity sabotsy 13 martsa ity, raha ny TAP Air Portugal kosa mandefa ny zotra Lisbon - Cancún ny 27 martsa miaraka amin'ny sidina telo isan-kerinandro. Manomboka ny sidina mivantana an'i Cancún - sidina Medellin ny 28 martsa ny sidina amerikana atsimo WINGO. Ny zotram-piaramanidina efa misy avy any Bogotá dia manidina inefatra isan-kerinandro.
Ny Quintana Roo fizahan-tany momba ny fizahan-tany, izay mampiroborobo ny toerana itodiana any Karaiba Meksikana amin'ny ITB Berlin 2021 dizitaly amin'ity herinandro ity, dia manohy mitantana ny serasera amin'ireo masoivohon'ny fizahan-tany sy ireo mpandraharaha fizahan-tany hizarana ireo fombafomba fiarovana sy fahasalamana napetraky ny fanjakana hiarovana ny fahasalaman'ny mpitsidika ary ny eo an-toerana.
Spirit Airlines mitondra tanàna fito tsy afaka mijanona amin'ny morontsirak'i Florida
Global Travel Taskforce dia mety hanomboka an'i Grande-Bretagne manerantany - raha toa ka mihazona ny herin'ny Border Force ny minisitra